Pejy an-tsary : Fivoriana momba ny zon’olombelona
Fanatsarana ny asa : Nomena fitenenana ny mpiasan’ny Ministeran’ny Fitsarana
Pejy an-tsary : Fitsidihana tany Toliara
Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Masoivoho 4 no noraisina teto Faravohitra
Fitsidihan’ireo mpikambana ao amin’ny HCDDED tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjanana, Minisitry ny Fitsarana Atoa IMBIKI HERILAZA, teto Faravohitra.
Pejy an-tsary : Fanangana-tsaina teny amin’ny Fitsarana Tampony
Fitsarana Ambony Toliara : Nanao fianianana ny Tonia Mpampanoa Ambony vaovao
Fivoriana momba ny zon’olombelona niarahana tamin’ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Fampandrosoana (PNUD) sy ny Ministeran’ny Atitany ary ny Fanapariaham-pahefana natao tao amin’ny Tranombokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra.
Pejy an-tsary : fanaovam-baksiny
Fanaovam-baksiny andiany faharoa teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra. Tsindrona faharoa (2e dose) amin’ny vaksiny Astrazeneca, sambany kosa no nanaovana ny vaksiny Janssen tamin’ity.
Fiovana no tarigetra. Porofo amin’izany ny fanomezana fitenenana ireo mpiasa, nisolo tena ireo sokajin’asa rehetra eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, androany Alatsinainy 13 Septambra 2021 tao aorian’ny fananganan-tsaina. Voalohany eo amin’ny tantara no nisy Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka na Minisitry ny Fitsarana niangavy ireo mpiara-miasa hitondra soso-kevitra, hilaza ireo olana, handroso vahaolana, itondra anjara biriky ho fanatsarana ny asa sy hanatrarana ny tanjona iraisana. Nohenoina ny avy amin’ny Mpiraki-draharaha, ny avy amin’ny Mpandraharahan’ny Fonja, ny avy amin’ny Mpitsara, ary ny avy amin’ireo mpiasa iankinana (personnel d’appui).
Amin’ny ankapobeny, dia ny fampitaovana toy ny birao, ny fiara, ny fotodrafitrasa, ny fitaovana teknolojika sy ny fampiofanana no niompanan’ny fangatahan’ireo mpiasa. Nisy ihany koa ny fanentanana fanaovam-baksiny amin’ny ady amin’ny fipariahan’ny valanaretina Covid19.
Ho an’ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, kosa dia nisaotra ireo mpiasa tamin’ny tsy fisalasalana nitondra ireo fanamarihana sy fangatahana ary ny fanehoana fahavononana.
« Hisy ny ho vita, ary hisy kosa ny mety tsy ho vita satria miankina amin’ny teti-bolam-panjakana sy ireo mpanohana ary mpiara-miombon’antoka ny fahafahana manatontosa ireo. Aoka kosa isika ho mendrika ny homena ireo, na amin’ny asa na amin’ny fitondran-tena » hoy Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Tsy resaka am-bava fotsiny fa avy hatrany dia nanolotra fanomezana solosaina miisa 10 avy amin’ny anaran’ny tenany manokana, ny Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza. Ireo dia ho zaraina amin’ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny izay mila izany maika. Tsiahivina moa fa ny Zoma lasa teo tany Toliara, dia nanome fanomezana, karamany 3 volana ho fanampiana amin’ny ady amin’ny Kere any Atsimo, Atoa Mpitahiry Fitombokasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana.
– Fitsidihana natao tao amin’ny Tribonaly ara-bola sy ny Tribonaly misahana ny ady amin’ny Fanjakana eto Toliara, momba ny fampiasana ny teknolojia vaovao
– Fitsidihana ny ivotoerana Nathanaël, mpitaiza zaza kamboty reny, eto Toliara
– Fitsidihana ny fonjabe eto Toliara ho fanatsarana ny Asa
– Fivoriana arak’asa nihaon’ny Mpitahiry ny Fitombonkasem-panjakana Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, tamin’ireo Mpitsara eto anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) sy ny Fitsarana Ambony (CA) , ny ao amin’ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana (TA) ary ny ao amin’ny Fitsarana ara-bola (TF)
– Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Tonia Mpampanoa Ambony eo anivon’ny Fitsarana Ambony (PGCA) eto Toliara, Atoa NIRINA Jean Désiré Arivoson.
Tanjona ny fanafainganana sy fanatsarana ny asam-pitsarana. Anisan’ny ilaina amin’ny fanatrarana an’izay ny fitaovana vaovao hoenti-miasa. Anjaran’ny tsirairay no maneho ny fahavononany.
Nivoitra ireo nandritra ny 2 Andron’ireo Lehiben’ny Fitsarana (Journées des Chefs de Juridiction-JCJ) natao tao amin’ny trano fandraisam-bahiny « Le Palétuvier » eto Toliara. Nifarana androany Alakamisy 9 Septambra 2021 ny JCJ ho an’ny avy aty amin’ny tapany atsimon’ny Nosy (Fianarantsoa sy Toliara). Tsiahivina fa ny lohahevitra dia » Fitantanana ny Fitsarana amin’izao vaninandron’ny nomerika na hai-kajy mirindra » (Management des juridictions à l’ère du numérique).